Uyisebenzisa kanjani i-Zoom H6 njenge-Audio Interface kwi-Mevo | Martech Zone
Uyisebenzisa kanjani i-Zoom H6 njenge-Audio Interface kwi-Mevo
NgoLwesine, Julayi 25, 2019 NgoLwesine, Julayi 25, 2019 Douglas Karr
Ngamanye amaxesha ukunqongophala kwamaxwebhu kwiiwebhusayithi kuyacaphukisa kwaye kufuna itoni yovavanyo kunye nephutha ngaphambi kokuba ufumane into isebenza ngokuchanekileyo. Omnye wabathengi bam yi Elona ziko likhulu ledatha kumbindi mpuma kwaye bakhokele ilizwe kwizatifikethi. Ngelixa sityhala umxholo ngamanye amaxesha, ndifuna ukwandisa amandla abo ukuze babonelele ngexabiso ngakumbi kubathengi nakwamanye amajelo.
Ukusasaza ngqo iinkcazo ezithile kwimigaqo emitsha, ukwenza udliwanondlebe neengcali ezithile zeshishini, okanye ukunika nje ukuthotyelwa okanye iingcebiso zokhuselo amaxesha ngamaxesha kunokuba luncedo. Ke, ndibancedile ukwakha istudiyo sokurekhoda iipodcast, ukurekhoda iividiyo kunye nokusasaza bukhoma.
Banamagumbi amakhulu ebhodi apho ndabeka indawo kwaye ndayikhusela ngamakhethini alalelwayo ukunciphisa isandi. Ndigqibe kwelokuba ndihambe noseto olunokuphatheka semi Ikhamera yokusasaza bukhoma yeMevo, i Zoom H6 irekhoda, yaye Iifowuni ezingenazintambo ze-Shure lavalier. Oku kuthetha ukuba ndinokumisela kwiindawo ezingenakubalwa ukurekhoda- ukusuka kwitafile yebhodi ukuya kwindawo yokuhlala nayo yonke into ephakathi.
Ewe kunjalo, ndakuba ndizifumene zonke izixhobo kuxa ndangena kwimicimbi. Inkqubo ye-Zoom H6 kunye ne-Shure isebenza ngokungenasiphako, kodwa bendinexesha elinzima lokuzama indlela yokusebenzisa i-Zoom H6 njengonxibelelwano lomsindo kwi-Mevo.
Zoom H6 kunye neMevo Boost
Inqaku elinye koku kukuba ufuna ukusebenzisa iMevo Boost, ebandakanya ukukwazi ukunxibelelana ngenethiwekhi ukusasaza, kunye ne-USB yeaudiyo, kwaye unamandla kunye nebhetri eyandisiweyo. Ndivavanye inkqubo ngeendlela ezilishumi elinambini… ndizama ukufumana ulwazi oluthile Amaxwebhu alinganiselweyo kaMevo ebonisa iZoom H4n hayi i-H6… enomahluko omkhulu.
Ngokwenyani yayintsonkothile kunokuba ndandicinga:
Xhuma i-Zoom H6 kwi-Mevo Boost nge-USB. Phawula: Oku ngekhe kuyenze amandla i-Zoom H6 (Boo!) Ke kuya kufuneka usebenzise iibhetri.
Layita iMevo emva koko yandisa iZoom H6.
Kwi-Zoom H6, kufuneka uhambe ngenkqubo yemenyu kwaye usete njenge isikhombisi somsindo kuba ukurekhoda kwemizila emininzi kuba I-PC / Mac isebenzisa amandla ebhetri.
Nazi izikrini ngokulandelelana (sukunikel 'ingqalelo kwinto ebonisiweyo yemenyu, ndikhuphe la mafoto kwincwadana ye-Zoom H6).
Sebenzisa i-Zoom yakho ye-H6 njengesiQinisekiso seAudio
Khetha i-Multi Track ukuze ukwazi ukusebenzisa lonke igalelo lemakrofoni yakho
OKUBALULEKILEYO: Khetha iPC / Mac usebenzisa amandla ebhetri
Ingeniso ye-Mevo USB
Ngoku uya kuba nakho ukubona i-USB njengegalelo lokumamela kwi-Mevo! Cofa nje ukudibanisa kwaye uya kuba ukulungele ukuya.
Inqaku esecaleni, amaxwebhu eZoom H4n ithi iziphumo zomsindo kufuneka zibe yi-44kHz endaweni ye-48kHz. Kwi-Zoom H6, khange ndikwazi ukuguqula ubungakanani bemveliso xa yayisetyenziswa njengonxibelelwano lweaudiyo ye-USB. Ukuba uyazi njani, ndixelele! Kwavakala kulungile kwi-48kHz ke andiqinisekanga ukuba iyimfuneko.
Ukwazisa: Ndisebenzise iikhowudi zam ezinxulumene neAmazon kule post.
tags: mevoukunyusa mevoemvausondeza h6
Zeziphi iiQhinga eziPhezulu zokuba ii-SaaS Platform zikhule
Isikhokelo sokuGqibela sokwakha iSicwangciso seNtengiso seDijithali